‘Tsy Tiako Ho Voan’ny Homamiadana Toa Ahy Ny Ankizy, Na Iza Izy Na Iza’, Hoy Ny Mponina Iray Tao Fukushima · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2016 12:48 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, বাংলা, Français, Nederlands, Ελληνικά, English
“Sinibendrano Fukushima.” Sary avy amin'ny kaonty flickr ofisialin'ny IAEA Imagebank. Lisansa: CC BY-SA 2.0
Nakarin'i Ian Thomas Ash, mpamokatra sarimihestika tsy miankina, ho ao amin'ny YouTube ny tafatafa iray misy fizaràna efatra nifanaovany tamin'ny vehivavy tanora iray tao amin'ny Prefektioran'i Fukushima izay voatily ho voan'ny homamiadan'ny tiroida. 20 taona izy ankehitriny, fa 15 taona kosa fony tsy afaka niasa araka ny heriny ilay foibe nokleary mpamokatra herinaratra tao Fukushima Daiichi ary tsy nahavita nampangatsiaka ireo vondrom-pihary herinaratra , taorian'ilay horohorontany tamin'ny Martsa 2011 sy “tsunami”. Niteraka andianà fipoahana hidrozena izay nanimba be tokoa ny efatra tamin'ireo vondrom-pihary herinaratra tao Daiichi ilay tsy fahampian'ny fampangatsiahana.
Vokatr'ireo fipoahana sy ny afo naterany, niparitaka tamin'ny faritra avaratra atsinanan'i Japàna ny taratra nokleary. Iray tamin'ireo 166 mponina tao Fukushima teo amin'ny faha-18 taonany na latsak'izany tamin'ny fotoana nitrangan'ilay loza nokleary ilay vehivavy tanora nitafàna, izay nangataka ny tsy hitonona anarana, ary voatily ho voa na ahiahiana ho voan'ny homamiadan'ny tiroida (hatramin'ny Febroary 2016).
Raha lazain'ny sasany ho noho ny fitiliana henjana loatra no niteraka ny homamiadan'ny tiroida, Ash kosa manamarika fa 74.5% amin'ireo tanora eo anelanelan'ny 18 sy 21 hatramin'ny 1 Aprily 2014 izay nonina tao Fukushima tamin'ny fotoana nitrangan'ilay loza nokleary no tsy mbola nandalo ilay fitiliana ofisialy ny homamiadan'ny tiroida amin'ny alàlan'ny “ultrason”.
“Ny antony itenenan'ity vehivavy tanora ity dia mba hanentanana ny fianakavian'ireo ankizy tsy mbola nanao filitiana tamin'ny alàlan'ny “ultrason” mba hitondra ny zanany hotiliana,” hoy i Ash ao amin'ny teny fampidirana ilay tafa.
Nakarina anaty ampahany efatra ao amin'ny Youtube ilay tafa: ampahany 1, ampahany 2, ampahany 3, ampahany 4.
Ambaran'ilay vehivavy fa araka ireo mpitsabo azy, dia hita ara-potoana ny homamiadana manjo azy. Raha niandry ela izy, hoy izy ireo, mety efa niely ilay homamiadana. Vokatr'ilay aretina, nisy ampahany tamin'ny tiroida nesorina taminy.
Hanomboka hiasa ao aminà akaninjaza iray izy amin'ity taona ity, ary sahirana mieritreritra ireo ankizy hafa mandia ny zavatra niaretany :
Hàlako raha misy amin'ireo ankizy nampianariko no hitondra ny aretina homamiadana. Raha ny marina no holazaina, Tsy tiako ho voan'ny homamiadana toa ahy ny ankizy, na iza izy na iza.
Ash, mipetraka any Tokyo, dia mamokatra fanadihadiana fohy momba ny fiainana ao Japàna taorian'ilay horohorontany sy tsunami tamin'ny Martsa2011 ary ny loza nokleary.